गुल्मी १ नं. प्रदेश सभा “क” मा सुदर्शन बराल बिजयी – Gulminews
Home/निर्वाचन अप्डेट/गुल्मी १ नं. प्रदेश सभा “क” मा सुदर्शन बराल बिजयी
गुल्मी १ नं. प्रदेश सभा “क” मा सुदर्शन बराल बिजयी
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ मंसिर २३, शनिबार २२:३३ मा प्रकाशित
मङ्सीर २३ । गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश “क” मा बामगठबन्दनका तर्फबाट उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका सुदर्शन बराल बिजयी भएका छन् । कुल १७ हजार ९ सय २२ मत प्राप्त गरि बाम उम्मेदवार सुदर्शन बराल बिजयी भएका हुन् । बरालले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका पृथ बहादुर फौदारलाई हराउँदै जित हासिल गरेका हुन् । फौदारले जम्मा १३ हजार २ सय ९९ मत ल्याएका थिए ।
यसअघी सुदर्शन बराल माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिकामा विधायक पनि हुनुहुन्थ्यो । एमाले राजनीतिबाट राजनैतिक यात्रा तय गर्नुभएका बराल स्नातकसम्मको औपचारिक शिक्षा लिनुभएको छ। हर्राचौर -२ झारखर्कमा गौरी र भानुभक्त बरालको गरीब किसान परिवारमा जन्मनुभएको थियो। बराल ०५३ देखि माओवादीको भूमिगत राजनीतिमा होमिनुभएको थियो। उहाँ ०५४ देखि ०६३ सम्म भूमिगत राजनैतिक जीवन बिताउनुभएको थियो। उहाँको युद्धमोर्चामा चुत्राबेसी नामक कवितासंग्रह पनि प्रकाशित भएको छ।
उता प्रदेश “ख” मा पनि बामगठबन्दनकै तर्फबाट उम्मेदवार नेकपा एमालेका कमल श्रेष्ठको अग्रता कायमै छ ।
यस अघी गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश “क” र “ख” दुबैमा गठबन्दनका उम्मेदवारहरुले जितेका छन् । क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश “क” बाट एमालेका खड्ग के.सी र “ख” बाट माओवादी केन्द्रका दिनेश पन्थीले जित निकालेका हुन् ।